Ujyaalo Times | चलचित्र ‘नन्दी’ को पोष्टर सार्वजनिक
चलचित्र ‘नन्दी’ को पोष्टर सार्वजनिक
डोटेली भाषाको चलचित्र ‘नन्दी’को पोष्टर सार्वजनिक भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सो चलचित्रको छायांकन भएको हो । चलचित्रको नामकरण र कथावस्तु दिपायलकै सेरोफेरोमा आधारित रहेर तयार पारिएको निर्माता विनोद बोहराले जानकारी दिए । पुस पन्ध्रमा पहिलो ट्रेलर युट्टुब […]
काठमाडौँ । स्वर्गीय कलाकारद्वय केशव भट्टराई र दीपक क्षत्रीको सोमबार पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ ।कलाकार क्षत्रीको शनिबार निधन भएको थियो भने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका भट्टराईको आइतबार राति निधन भएको थियो । दुवैको अन्तिम संस्कार भने आजै […]
प्रियसीका सुमधुर मुस्कानहरु संगालेर कति !
कुसुम गौतम – गजल उसले प्रेमको मूर्ति राख्ने मन्दिर बनाउँदै थियो पिरतीका रङ्गीन थुँगाहरु त्यहाँ चडाउँदै थियो । प्रियसीका सुमधुर मुस्कानहरु संगालेर कति ! गजलका पङ्क्तिहरुमा सुरताल मिलाउँदै थियो । फूलको परागमा लठ्ठिएको भमरा झैँ हरपल अधरका पङ्खुडीमा बन्धि भई […]
एजेन्सी । ७७ वर्षका अमिताभ बच्चनले अब फिल्मबाट अवकाश लिने मन बनाएका छन् । हालै बलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा ५० वर्ष पूरा गरेका उनले आफ्नो ब्लगमा रिटायमेन्टतर्फ संकेत गरेका छन् । उनले लेखेका छन, अब मैले अवकाश लिनुपर्छ । दिमाग अरु […]
कस्तो हुन्छ, विवाह पछिको जीवन
विवाह संस्कारपछि एउटी युवती एकाएक जिम्मेवार बन्छिन्‌। उनको जीवन एक धरातलमा उभिन पुग्छ जहाँ दायित्व र कहिल्यै नसकिने लामो सूची हुन्छ। कामको शुरूमा केही समस्या हुन्छ जुन कुरा र काम सिकाउन आमा सधैं पछि लाग्थिन्‌ ती सबै कुरा एउटी युवतीले […]
मायामा न हाँसो गनेर साध्य हुन्छ, न आँसु नै ?
फ्रेसन्यूज नेपालले साहित्यकार प्रतीक्षासँग गरेको आँसु संवाद प्रस्तुत छ: आँसु के हो ? रुन कै लागि भनेर ‘गुड क्राइङ क्लब’ हरु खोलिने अहिलेको जमानामा मलाई आँसु कुनै रहस्यमयी संगीत जस्तो लाग्छ । यसो हेर्दा यो हाम्रो वशको कुरा हो तर […]
पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ तपाईलाई कुनै बर्षिया महिलाले आफुभन्दा ४७ बर्ष जेठा ६८ बर्षका वृद्धसंग बिबाह गरेको सुन्दा तर यो बास्तबिकता रहेको छ । इलामका ६८ बर्षका एक वृद्धले आफुभन्दा ४७ बर्ष कान्छी माइधारकि पुजालाइ आफ्नी दुलही बनाएर ल्याएका छन […]
इन्स्टामा आमिर खानकी छोरीले यस्तो फोटो राखेपछि
मुम्बइ – बलिउडस्टार आमिर खानकी छोरी इरा ‘डेब्यु चर्चामा आएकी छन्। ‘मेडिया’ नामको नयाँ प्रोजेक्टका लागि उनको नाम समाचारमा छाइरहेको छ । यससँगै पछिल्ला दिनमा सामाजिक सञ्जालमा उनको हर्कतले धेरैलाई चकित तुल्याएको छ । हालै उनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट् गरेका तस्बिरका […]
ज्याेती मगरकाे सडकमै देखियाे रमिता !
विवादित गायिका ज्याेती मगरकाे चर्चा र अालाेचना कुनै नाैलाे बिषय भने हाेइन । तरपनि पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा मगरले पाेस्ट गरेको प्राेफाइल तस्बिरले फेसबुक रंगिएकाे छ ।